Soosaaraha ugu fiican soosaaraha wershadda iyo Warshad | Hadal
Iskuxirida sanduuqa gawaarida madaxa xamuulka, kaas oo samee aalad laga saari karo mootada, sanduuqa gearka, halbeegga mid. Saamiga laga bilaabo 4 illaa 100, awoodda laga bilaabo 15kW ilaa 500kW. Ku habboon gaadiidleyda badankood khaas ahaan kuwa wax xambaara waxay u baahan yihiin inay guuraan. Pulley drive madaxa isku dhafan pulley, jiilaalka gadaal, marsho helical, saldhig motor. Keydso isku-xidhka, samee qaab-dhismeed is haysta, iyo kor u fududaan, buuq hooseeya, kalsooni sare, dayactir fudud. Iyada oo dabool caag ah oo iska caabid sareeya hawlgalka nolosha dheer. Gears waa l ...
Iskuxirida sanduuqa gawaarida madaxa xamuulka, kaas oo samee aalad laga saari karo mootada, sanduuqa gearka, halbeegga mid. Saamiga laga bilaabo 4 illaa 100, awoodda laga bilaabo 15kW ilaa 500kW. Ku habboon gaadiidleyda badankood khaas ahaan kuwa wax xambaara waxay u baahan yihiin inay guuraan.
Pulley drive madaxa isku dhafan pulley, jiilaalka gadaal, marsho helical, saldhig motor. Keydso isku-xidhka, samee qaab-dhismeed is haysta, iyo kor u fududaan, buuq hooseeya, kalsooni sare, dayactir fudud.
Iyada oo dabool caag ah oo iska caabid sareeya hawlgalka nolosha dheer.
Gearsku waa shey yar oo kaarboon yar ah oo wax iska caabbinta sare leh, oo leh caburizing, daminta adkaanta HRC 58-62, oo leh dusha sare ee dhulka oo ay garwaaqsan tahay buuq yar, awood sare, nolosha 100000 saacadood.
Mashiinka jilibka oo leh bir daawaha leh oo leh Quenching iyo tempering to HB280-315 oo leh iska caabin sare.
Qaab leh kalsooni sare
Pulley waxaa ku raagay caag RIT caag ah.
Shirarka Fox Head Pulley waxaa loogu talagalay loona dhisay dhowr awoodood oo kaladuwan.
Mashiinka madaxa lagu riixo wuxuu ku habboon yahay walxaha laga soo raro ciidda Silica oo ah ciid aad iyo aad u fiican oo loo isticmaalo soo saarista kaniisadda iyo shaashadaha taabashada ee taleefannada gacanta ee aan birta lagu arki karin, waxaa sidoo kale loo isticmaalaa marawaxadaha gaaska.
Kulamadan Madaxa Pulley waxaa loogu talagalay sida ay yihiin si looga wareejin karo hal meel loona wareejiyo meel kale maadaama tayada wax soo saarka la soo saarayaa ay kala duwan tahay.
FOX Bliss soo saaraha naqshadeynta asalka ah
1500 taxane madaxa wadista
2000 taxane madaxa wadista
1200 madaxa drive taxane la heli karo
Wareega wadnaha 58 "oo loogu talagalay 52" suunka gawaarida wejiga
Wareega wadnaha 52 "ee loogu talagalay 46" suunka gawaarida wejiga
Waxaan sidoo kale u habeyn karnaa wadida gawaarida codsiyada gaarka ah.
Wax soo saarkayaga ayaa si guul leh loogu isticmaalay Australia, Chile, Koonfur Afrika. Badanaa waxaa loo isticmaalaa beddelka madaxa wadista Bliss Fox.
Waxaan u adeegsanaa tikniyoolajiyad casriyeysan si aan madaxa wadnaha uga dhigno mid is haysta, karti sare leh, miisaan hoose.
Hore: sanduuqyada meerayaasha
Xiga: F taxanaha mashiinka istiraatiijiga ah ee mashiinka mashiinka lagu dhejiyo
Xirfadleyda Shiinaha Shiinaha ee Noocyada Noocyada S ...
2019 qiimaha jumlada Shiinaha qiray Sare Crown ...
Shiinaha Daad Shiinaha Tayada Sare Ball Ball Mi ...